#Soomaaliya oo looga dabaal dagey 57 Guuradii maalinta Xoriyadda - Get Latest News From Horn of Africa
#Soomaaliya oo looga dabaal dagey 57 Guuradii maalinta Xoriyadda
By WARIYAHA MUQDISHO On Jul 1, 2017 Last updated Apr 2, 2019
Mogadishu (AxadleTM)— Somalia ayaa maanta u dabbaaldeggayso 57-guurada ka soo wareegatay markii gobollada koonfureed ay xornimada qaateen sidoo kale-na ay is-raaceen labadii gobol ee Koonfur iyo Waqooyi.
Madaxweynaha Somalia, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay munaasabad calan saar ah oo Muqdisho lagu qabtay ka hadlay ayaa sheegay in Somalia ay uun mar isku soo noqon doonto.
Guud ahaan Soomaaliya ayaa looga dabaal dagayaa sanad guuradii ka soo wareegtay xilligii Gobollada Koonfureed ay ka xuroobeen gumeystihii Talyaaniga iyo israacii labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur oo hadda laga joogo 57 sanadood.
Kaddib munaasabad ballaaran oo xalay ka dhacday xarunta aqalka Dowladda Hoose ee Muqdisho oo lagu maamuusayay muhiimadda maalintaan ku astaysan midowgii labada gobol iyo ka xuroobiddii gumaystihii Talyaaniga gobollada koonfureed, ayaa waxaa ka qayb galay madaxda dalka sida, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, Guddoomiye ku-xigeenka Baarlamaanka, xubno ka tirsan golaha Wasiirrada, Guddoomiyaha gobolka iyo mas’uuliyiin kale.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed u diray hambalyo la xiriirta khiimaha maalinta kowda Luulyo, isagoo sheegay in ay madaxda dalka markastahi xusuus naan doonaan geesiyaashii u dhintay xornimada umadda soomaaliyeed.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in guushii israaca Soomaaliya ay ahayd mid aad u weyn, hase yeeshee muddo kaddib Ummadda Soomaaliyeed ay iyagu gacan tooda ku burburiyeen.
Dhanka kale Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in mar kasta laga maarmi doonin in dib ay u midoobaan Ummadda Soomaaliyeed isla markaana dib loo soo celin doono wada hadallada dowladda Federaalka Soomaaliya ay kula jirto Maamulka Soomaaliland.
Halkaan ka dhagayso warbixin ka hadleysa Maalinta Xoriyadda Soomaaliya: